shasha ye‘sadc’ | Kwayedza
23 Aug, 2018 - 09:08	 2018-08-23T09:13:15+00:00 2018-08-23T09:13:15+00:00 0 Views
President Mnangagwa vachikorokotedza Primrose Thandeka Tshuma mushure mekumupa $2 000 apo Vice President Constantino Chiwenga vakatarisa.
Andrew Muvishi naPanashe Machakaire
PRESIDENT Mnangagwa svondo rino vakapembedza Primrose Thandeka Tshuma — musikana anodzidza paJohn Tallach School, kuMatabeleland North — nekumupa US$2 000 mushure mekunge atora mubairo wepiri mumakwikwi ekunyora rondedzero eSADC Essay Competition kuWindhoek, kuNamibia svondo rapera.
Primrose akawanawo mibairo inosanganisira US$1 000, nhare yemhando yeSamsung Galaxy, laptop bag, flash disc neHuawei key holder kubva kuSADC.
Musikana uyu akanyora rondedzero yaive pamusoro pebasa riri kuitwa nemakambani akazvimirira mukusimudzira maindaisitiri mudunhu reSADC ine musoro unoti, “The role of the private sector in developing industries and regional value chains in the SADC region”.
President Mnangagwa vakakorokotedza Primrose kuState House nekukunda kwaakaita mumakwikwi aya.
“Tinonzwa kufara nemwanasikana wedu uyo atipa manyemwe mushure mekuhwinha mubairo wechipiri mumakwikwi eSADC Essay Competition kuWindhoek, kuNamibia, svondo rapera,” vanodaro President.
“Tinodada seZimbabwe, uyewo ini saPresident ndinodawo kumupa chipo chidiki che$2 000.”
Vachitaura pachiitiko chimwe chete ichi, gurukota redzidzo yepuraimari nesekondari, Professor Paul Mavima, vanoti budiriro yaPrimrose huchapupu hwedzidzo yepamusoro-soro yemuZimbabwe.
“Huchapupu hwakanaka zvikuru kudzidzo yedu uye tinovimba kuti ticharamba tiri pamusoro munyaya yefundo mudunhu rose,” vanodaro.
Prof Mavima vanoti Zimbabwe makore adarika yakambohwinha zvakare mumakwikwi aya mibairo yakasiyana inosanganisira wekutanga, wechipiri newechitatu pakati penyika 16.
Zvichakadai, Primrose anoratidza mufaro mukuru nekupihwa kwaakaitwa chipo che$2 000 naPresident Mnangagwa.
“Aka ndekekutanga kangu kuve paState House uye ndiri kunzwa kufara zvakanyanya nechiitiko ichi, zvikuru apo ndakawaniswa mukana wekufamba rwendo ndiri mundege imwe chete yaive naPresident,” anodaro.